गण्डकी प्रदेशको कृषि उत्पादकत्व बढ्यो, औद्योगिक क्षमता उपयोग ५६.२३ प्रतिशत - Arthakoartha.com
गण्डकी प्रदेशको कृषि उत्पादकत्व बढ्यो, औद्योगिक क्षमता उपयोग ५६.२३ प्रतिशत
काठमाडौं, २९ साउन । गण्डकी प्रदेशको कृषि उत्पादकत्व एवं उद्योगहरूो औसत क्षमता उपयोग बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन–प्रथम अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (२०७७÷७८)’ले यस्तो देखाएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशको खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन २.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आलुको उत्पादन २८.५५ प्रतिशत, कोदोको उत्पादन ४.६० प्रतिशत र मकैको उत्पादन १.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तरकारी तथा बागवानी तर्फको उत्पादन १४.८२ र फलफूल तथा मसला बालीको उत्पादन भने ९.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा २१ अर्ब ७० करोडको कर्जा लगानी रहेको छ, जुन कुल कर्जा बक्यौताको ७.८४ प्रतिशत हो ।
अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरुको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ५६.२३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औद्योगिक क्षेत्रमा ५८ अर्ब ५५ करोडको कर्जा लगानी रहेको छ, जुन कुल कर्जा वक्यौताको २१.१६ प्रतिशत हो ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट संकलित कुल निक्षेप १२.०२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३ खर्ब ३६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । कुल कर्जा प्रवाह ११.८९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २ खर्ब ७६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति करिब ७० प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी कोरिडोर) को कार्य प्रगति करिव ४२ प्रतिशत रहेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको गोरखा–लमजुङ खण्डको करिब १११ कि.मि.मध्ये २५ प्रतिशत र कास्की–पर्वत–बाग्लुङ खण्डको करिब २४५ कि.मि. मध्ये ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको पाइएको छ ।